What’s new – Page 22 – MDIF
MDIF launches digital investment fund
MDIF has launched an early-stage fund for digital news and information businesses, Digital News Ventures®. Digital News Ventures provides early-stage equity finance from $30,000 to $300,000 to entrepreneurs…
Express’s future jeopardized by government threats
Afteralong campaign of threats and other harassment, the Ukrainian government appears to have interfered in the judicial process to secureacourt ruling that jeopardises Express‘s future.
ကပ်ဘေးကာလ လူထုအကျိုးပြုအသိပေးကြေညာချက်များ – မီဒီယာလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုသည့်အပြင် ပြည်သူလူထုအတွက် သတင်းအချက်အလက်များရရှိစေခြင်း
လူထုအကျိုးပြုအသိပေးကြေညာချက်များ (PSA) သည် အရေးပေါ်ကာလမျိုးတွင် ကြော်ငြာရှင်များ ချန်လှပ်ထားခဲ့သည့် ကွက်လပ်ကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ PSA များသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ တန်ဖိုးရှိသောသတင်းစကားများကို ပရိတ်သတ်များ တွေ့မြင်ကြားသိစေသည့်အပြင် စီးပွားရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေချိန်တွင် မီဒီယာများရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။ ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှအစပြု၍ MDIF နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ၎င်း၏ မိတ်ဖက်မီဒီယာများက သတင်းစကားများကို ပြည်သူ ၂၆ သန်းခန့်အထိ အရောက်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။…
كيفية تقليص أثر أزمة كوفيد-19 على منشأتك الإعلامـية
PDF اضغط هنا لتحميل الدليل إن التهديد الذي تكابده المشاريع الإعلامية بسبب (فايروس كورونا) عالمياً لَهُوَ تهديدٌ مصيريّ؛ بدءاً من المخاطر الصحية التي تواجه الصحفيين في تغطيتهم للأحداث، ومروراً…
The threat posed to media businesses globally by the coronavirus is existential. From the health dangers facing journalists covering events to the decimation of the events industry and the…
Ideas para minimizar el impacto de la crisis producida por el Covid-19 sobre el área de negocio de su medio
La amenaza global que supone para los medios de comunicación el coronavirus es existencial. Desde los peligros para la salud de los periodistas que cubren las noticias, hasta la…
သင့်ရဲ့ မီဒီယာလုပ်ငန်းအပေါ် Covid-19 အကျပ်အတည်း သက်ရောက်မှု နည်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ မီဒီယာစီးပွားရေးတိုင်းဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံနေရပါသည်။ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်ကြောင့် သတင်းထောက်တွေဟာ စီးပွားရေးသမားတွေရဲ့ ပွဲတွေကို သွားရောက်သတင်းယူ တာတွေရပ်တန့်သွားသလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကလဲ သတင်းတွေမှာ ကြော်ငြာတွေမထည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ အထိဖြစ်လာပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အချိန်မျိုးတွင် မီဒီယာမန်နေဂျာများ၊ အယ်ဒီတာများနှင့် ပိုင်ရှင်များသည် သူတို့တည်ဆောက်ခဲ့ တဲ့ စီးပွားရေးအုတ်မြစ်ပျက်စီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘာမှလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသလို ခံစားနေကြရသည်။…
Как минимизировать влияние Covid-19 кризиса на ваш медиабизнес
Угроза, создаваемая коронавирусом для медиабизнеса во всем мире, является экзистенциальной. От опасностей для здоровья, с которыми сталкиваются журналисты, освещающие события, до уничтожения индустрии ивентов и решения брендов не…
Kako umanjiti uticaj krize Covid-19 na vaš media biznis?
Pretnja koju korona virus predstavlja medijskim biznisima na globalnom nivou je egzistencijalna, počevši od opasnosti po zdravlje novinara koji pokrivaju događaje, desetkovanja “events” industrije pa do odluka brendova…